विशेष Archives - Page 46 of 96 - Sabal Post
जीवनमा के-के गर्ने सफलता पाउन ?
अहिलेको समय प्रतिस्पर्धाको समय हो । शत प्रतिशत आउटपुट भए मात्र स्थान पाइन्छ आजकल । निरन्तर गुणात्मक परिणाम दिने क्षमता राख्यो भने मात्र सफलताको दिशामा जान सकिन्छ ।सफलता पाउन र त्यसलाई कायम राख्नु फरक कुरा हुन् । दुवैमा निक्कै मेहनत
२७ आश्विन २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
पुरुषले भुलेर पनि अरुलाई भन्नु हुँदैन यी कुरा
चाणक्य राजनीतिका मात्र नभई जीवन दर्शनका पनि ज्ञाता थिए । उनले जीवनमा जे–जति अनुभव सँगाले र जुन नियम बनाए त्यो लोकलाई दिएर अमर भए ।उनी महान् शिक्षक, गुरु पनि थिए । उनका केही कुरा जो सयौं वर्षपहिले जति सान्दर्भिक थिए,
आज बुटवलको देवीनगर चौपारीमा मौलिक सास्कृतिक झल्काउने सरायँ नाच प्रदशन हुदै
नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको अन्तिम कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आज बुटवलको देवीनगर चौपारीमा मौलिक सास्कृतिक झल्काउने सरायँ नाच प्रदशन हुदै छ। बुटवल ११ देवीनगर स्थीत नवदुर्गा मन्दिर समितिको आयोजनामा हुने सरायँ नाच प्रदशनीमा बुटवलका विभिन्न टोल विकास सस्था तथा सहकारी द्वारा
तपाईंले आफैलाई ‘किन केही मानिसहरू साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ’ जस्ता प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ तर मानिसको भाग्य राम्रो वा नराम्रा भन्ने कुरा हुदैँन । मनोविज्ञ रिर्चड वाइजमनका अनुसार मानिसहरूले राम्रो हुन् वा नराम्रो आफ्ना भाग्य आफै कोर्छन् ।वाइजमनले भाग्यको भूमिका र मानिसहरूको
केही कुरा याद हुँदैन ? यी तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता
कहिलेकाँही कुनै व्यक्ति वा स्थानको नाम जति सम्झिन खोजेपछि यादै आउँदैन । यस्तो धेरैजनालाई भएको हुनुपर्छ ।उमेर बढेसँगै मानिसहरुको स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने बताइन्छ । यस्तो साँच्चै हुन्छ पनि तर दिमागलाई तन्दरुस्त राख्न सकिन्छ ।यदि तपाईं आफ्नो दिमागी क्षमता
२५ आश्विन २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
५० देखि ५५ लाख मानिसमा मानसिक समस्या बढ्दै
काठमाडौँ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । करिब ५५ लाख मानिसमा कुनै न कुनै समस्या रहेको बताइएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० देखि ५५ लाख मानिसमा मानसिक समस्या रहेको छ । आर्थिक वर्ष
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को काठमाडोैं कुम्भमेला सुरू हुन अब केही दिन मात्रै बाँकि छ । यही अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म आयोजना हुने यो कुम्भमेलाका लागि ठूलो संख्यामा एनआरएन अगुवाहरू काठमाडौै पुगेका छन् भने केही काठमाडोैतिर लागिरहेका तस्बिरले सामाजिक
दशै बहिस्कार गर्नेहरु प्रति धनराज गुरुङ कडा : बरु गोली खान तयार छु तर मनाउन छाड्दिन ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता धनराज गुरुङले नेपालीहरुको महान पर्ब बडा दशै बहिस्कारको अभियान चलाउनेहरु प्रति कडा प्रहार गर्नु भएको छ । उहाँले दशैं जस्तो मान्यजनबाट टीका लगाएर आशिर्बाद लिने पर्व मनाउन छाड्न नहुने उहाको तर्क छ ।
काठमाडौ । गैर आवासीय नेपाली संघ एनाआरएनए को नवौँ विश्व सम्मेलनमा करिब २ हजार ९ सय प्रनिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । यही अक्टोवर १५ देखी १७ तारिख सम्म काठमाडौँमा हुने गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए मा आवद्ध विश्वका ४३
डेट जादै हुनुहुन्छ भने यी काम गर्दै नगर्नुस्
मन परेको मानिस पाउन कसले पो के गर्दैन र मन परेको मानिस पाउन जे गर्न पनि तयार हुन्छन् आजकलका प्रेमी प्रेमीकाहरु ।उनीहरुलाई कसरी आर्कषित गर्ने भनेर सकेसम्म मेहनत गर्दछन् । तर कहिले काहि यसरी गरीएको मेहनत ब्यर्थ जाने गर्दछ ।